Ngemva konyaka ukuthatha ukuhlolwa, futhi Nginezinkinga isiRashiya: neze kukhona tijobelelo amabizo! Yini lutho: imithetho elaligcwele nswi izincwadi ngaphansi komcamelo ilele, ngisho Rosenthal inhlukano emtatsheni wezincwadi wesikole uthethe, kodwa konke lokho akusizi. Kubonakala sengathi ngiwa ngokusebenzisa ukuhlolwa!
Ukuze imicabango edabukisayo ngokuvamile ikhanda lami angazange, naproshus ukucabanga ngivakashela ukuba umfundi wethu. Khanyisa intombazane uhlakaniphile, mhlawumbe yena iyongisiza ufunde indlela ukubhala emabito tijobelelo. Manje mina ukudayela inamba yefoni wakhe - futhi alwe! Wathi, ngehora lesithupha kusihlwa emhlanganweni kuhlelelwe. Ngithemba ukuthi ifundise ngicelwa ukuba ngithuthele gyrus.
Thina uhlale Svetka e kwekilasi esikoleni, wayinameka izincwadi, izinto zokubhalela, kuphikisana, ukuze ngokudluliswa uthisha Liyaqalaqalaza, nabangane bengidlala ephasishi. Khona-ke ngiyaqaphela ukuthi benza lokho Akubalulekile ukuzamula emaceleni, futhi imithetho isiRashiya zama.
It kuvela ukuthi tijobelelo amabizo kanye -chik- -schik- kunalokho imithetho sokuloba, ungakwazi ukukhumbula esebenzisa izinhlamvu zamagama. Cabanga ekuqaleni yako futhi ikukhumbule ongwaqa abhanqiwe ku voicelessness-Ezwakalisa: b-a, a-f, g-k, q, r, w, w, s-c. Umthetho sifundeka kanje: -chik- bhala isijobelelo uma ihlela izwi stem izophela d, m, s, c, w (cut - Umbazi, ukuwela - defector).
Qhathanisa ne ongwaqa abhanqiwe ngenhla. Sihlangane zifana? Nokho, kukhona ngetshe elilodwa kwamanzi: phambi ongwaqa kufanele kube umsindo unkamisa, kepha uma kungenjalo, khona-ke, yiba nomusa, ukubhala igama elithi ne isijobelelo "ebhokisini" (asphalt - asfaltschik).
Tijobelelo amabizo -chik- -schik- futhi musa letihambisana kokubusa ngenhla, uma okushiwo lucebe ye izwi alisho uhlobo umsebenzi umuntu noma umsebenzi wakhe, isibonelo, umalusi - ubuthishela kodwa tabunchik - umhlambi izilwane.
Mina ngisho wagxuma ngenjabulo lapho ngiqaphela ukuthi akunzima ukuhlukanisa phakathi morpheme. Lapha ukukhanya kimi kuthathwe umbuzo kwabamangaza: "Kwezinye izimo, isijobelelo kubhalwe -ank" Bengilokhu ngizama ukucabanga mayelana morpheme, ifuna izincwadi, ekufuneni amagama afanele, kodwa ngaphandle inkulumo ethi "bathhouse esikhulu" engqondweni ingahambi. Ngosizi wayivula incwadi, wabona ukuthi lokhu Isijobelelo e yolimi lwanamuhla Russian khona.
UYAHLEKA Khanyisa, 'kumelwe sibe abangane izincwadi namabhukwana ukwazi ukupelwa tijobelelo amabizo. " Ngiyaqonda, kodwa kuthiwani ngezinye guys?
"Yiba" Kulotshiwe ukuthi umngane wami, isibonelo, namanje akukacaci ukuthi ukuhlukanisa abstract (isihlobo) emabito kusukela tento uma ekupheleni kokubili amazwi. "On umbuzo, umngane wami, - uyayiphendula Khanyisa. - Isijobelelo -ost- babe emabito ekuphenduleni umbuzo "Yini?" Ngokwesibonelo, ingcebo, intukuthelo. Tento enjalo isijobelelo akuyona, futhi aphendule ngokuphelele eminye imibuzo, isibonelo, ukusebenzisa (lokho?), Pay (ukuthi yini okufanele uyenze?).
Yeka indlela okuthakazelisa ngayo - ngacabanga ukuvula incwadi ekhasini amabili wesibili. Uzofunda indlela hhayi ukwenza iphutha ngokubhala incwadi inhlanganisela Inc. nesijobelelo -enk-. It kuvela, Inc. - a-morpheme ezimbili kokuba lolu hlobo, uma emabito njengabesifazane ukwakha igama elisha kwaba inhlanganisela (a): perekladinka - oluvundlile, kodwa French - engumFulentshi. Okuwukuphela izwi nehobhe.
Khanyisa Ngiyakubonga kusasa ukuthenga wakhe ibhokisi ushokoledi bese njengesipho ngiyoqeqeshelwa. Mhlawumbe yena mina namanje qinisa izibalo?
Psittacosis: izimpawu zesifo kubantu futhi izinyoni
Ecubungula ezombusazwe Bogdanov Andrey Vladimirovich: Biography, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo